३३ किलो सुन गायब र सनम हत्या प्रकरण: डिएसपी पक्राउ, एसएसपी अझै फरार
काठमाडौं । ३३ किलो सुन गायब र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा महानगरिय अपराध महाशाखाबाट प्रहरी प्रधान कार्यलय तानिएका डिएसपी प्रजित केसी पनि पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यलय मोरङले
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर नै बनेन
काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा लिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आपत्ति जनाएको छ । आयोजना सम्पन्न हुने समय नजिक आइपुग्दासमेत मूल
राजविराज विमानस्थलको निर्माण कार्य तीव्र
राजविराज । करीब ५० वर्षदेखि अलपत्र रहेको सप्तरीको राजविराजस्थित विमानस्थल सञ्चालनमा आउने भएको छ । उक्त विमानस्थलको पक्की धावनमार्ग निर्माण लगायतका सम्पूर्ण कार्य अन्तिम चरणमा रहेकाले वैशाखको अन्तिममा यहाँ विमान
देवताका पुजारीले भत्काए छाउगोठ
बाजुरा । बाजुराको बडिमालिका नगरपालिका–३ पीपल गाउँस्थित दह घटाल देवताका पुजारी रामबहादुर खड्काले छाउगोठ भत्काउनुभएको छ । धार्मिक आस्था र विश्वासलाई बढावा दिने पुजारीले नै छाउगोठ भत्काएका हुन् । छाउगोठ
‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, कसैले भ्रष्टाचार गरे छाड्दिन’
बुटवल । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई समृद्ध बनाउन, नागरिकलाई आर्थिकरुपले सम्पन्न बनाउने कुरामा अब कुनै पनि कुरामा अल्झिन नहुने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि मुलुकभित्र भएका
५ हजारभन्दा बढी घरपरिवार खोलाको पानी खान बाध्य, वर्षायाममा आकाशे पानी थाप्दै
झापा । झापा मेचीनगरका तीन वटा वडाका साढे चार हजारभन्दा बढी घरपरिवार खोलाको पानी पिउन बाध्य छन् । पिउने पानीको अन्य स्रोत नहुँदा उनीहरु खोलाको पानी पिउन बाध्य भएका हुन्
युवा बिदेशिएपछि गाउँ नै सुनसान
सलिम अन्सारी,प्यूठान । राहदानी बनाएर तेस्रो मुलुक जानेको संख्या बर्से्नि बढदो छ । बढदो बेरोजगारी र घरमै परिश्रम गर्न हिच्किचाउदाँ प्यूठान जिल्लाबाट दर्जनौ युवाहरु बिदेशीरहेका छन । धेरै जसो गाउँमा युवाहरुको
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः भ्रष्टचारीको समुल नष्टका लागि कसैको अनुहार हेरिदैँन
यमलाल भुसाल, बुटवल । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टचारीको समुल नष्टका लागि कसैको अनुहार नहेरीने बताउनु भयो । उहाँले अनुचित कुरामा सरकारले कसैसंग सम्झौता नगर्ने र भ्रष्टचारको सवालमा सरकार निर्मम
तेह्रथुम । जिल्लाको फेदाप गाउँपालिका वडा नं ४ र ५ को सिमानामा रहेको नेपालकै अग्लो ह्यात्रुङ झरनामा पानी सुकेको छ । झरनामा खसिरहेको पानी आसपासका वनमा रहेका अलैँची बगानमा सिँचाइका
गुटबन्दीको चपेटामा कांग्रेस, देउवा र पौडेल पक्षको नाममा दुई कित्ता
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस शीर्ष नेताहरुको गुटबन्दीको चपेटामा परेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भोगेको पराजयको जिम्मा कसले लिने भन्नेमा समेत विवाद गरेर कांग्रेस नेताहरुले आम कार्यकर्तालाई निराश पारिरहेका
फूल फुल्ने ३१२ प्रजातिका वनस्पति नेपालमा मात्रै
काठमाडौँ । विभिन्न प्रजातिका फूल फुल्ने वनस्पतिमध्ये ३१२ प्रजाति नेपालमा मात्र पाइने गरेको छ । वनस्पति विभागले दिएको जानकारीअनुसार पाँच हजार ३०९ फूल फुल्ने वनस्पतिमध्ये नेपालमा मात्र ३१२ प्रजाति पाइने
प्रधानमन्त्रीले समृद्ध तर्फ देश अगाडि बढाउँ भन्दा सांसद संसदमै निदाए
बुटवल। देशलाई समृद्ध बनाउने उदघोष गर्ने नेताहरु नै संसदमा निदाएको देखीएको छ । प्रदेश नं. ५ को संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध तर्फ देश अगाडि बढाउने भाषण गरिरहँदा सांसदहरु निदाएका
गरे के हुन्नः चन्दाबाटै बन्यो दश किलोमिटर सडक
म्याग्दी । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ घराम्दीका बासिन्दाले चन्दाबाट आर्थिक स्रोत जुटाएर १० किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण गरेका छन् । स्थानीय, प्रवासी, छिमेकी गाउँका बासिन्दाबाट रु एक करोड १७ लाख ८५ हजार
डडेल्धुरामा जन्ती बोकेको जिप दुर्घटना
डडेल्धुरा । डडेल्धुरा नवदुर्गा गाउँपालिका–१ कोटेलीबाट जन्ती बोकी गन्यापधुरा गाउँपालिकातिर गइरहेको से १ ज २३८ नं को जिप दुर्घटना हुँदा जन्ती गएका सातजना घाइते भएका छन् । जन्ती बोकेको गाडी केआइसिंह
प्रतिबन्धित कुखुरा भारतबाट ओसारपसार
लहान । अवैधरुपमा भारतबाट ल्याउँदै गरेको प्रतिबन्धित कुखुरासहित प्रहरीले गएराति सिरहाको बरियारपट्टिमा एउटा सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको छ । स१च १३५७ नम्बरको पिकअप भ्यानमा भारतबाट नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले गाडी
घरमै सुत्केरी हुने अधिक, कसरी हुन्छ सुरक्षित प्रसूति ?
रोल्पा । सुरक्षित प्रसूतिका लागि भन्दै सरकारले जिल्लामा ६३ वटा वर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । नागरिकको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै सकेसम्म कम दूरी रहने गरी स्थापना भएका ती वर्थिङ सेन्टरमा
यातायात व्यवसायीको आन्दोलनले बुटवल अस्तव्यस्त
यमलाल भुसाल, बुटवल । यातायात क्षेत्रका संघ सस्था खारेज गर्दै सरकारले सिण्डिकेट हटाएपछी आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यबसायी महासंघ सम्युक्त आन्दोलन समितिले पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार आईतवार सवै प्रदेशको राजधानीमा रहेका
भरिँदै गाउँ, खाली हुँदै सदरमुकाम
ध्रुवसागर शर्मा, म्याग्दी । सरकारी कामकाज स्थानीयस्तरमै हुन थालेपछि म्याग्दीका गाउँहरु भरिन थालेका छन् भने सदरमुकाम बेनीबजार खाली हुँदै जान थालेको छ । संघीयताको कार्यान्वयसंगै स्थानीय निकाय बलियो भएर ग्रामीण
चीन पठाउने गैँडाको केटोलाई ‘पिट बोमा’मा राखियो
चितवन । चीनलाई उपहार दिन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको खोरियामुहानबाट नियन्त्रणमा लिइएको दुर्लभ एक सिंगे गैँडालाई चितवनको रत्ननगरस्थित सौरहाको पिट बोमा (सानो खोर)मा ल्याएर राखिएको छ । निकुञ्जको पश्चिम सेक्टरअन्तर्गत खोरीया मुहानबाट
एक चक्की सिटामोलको सात रुपैयाँ
ललित सिंह, बझाङ । औषधि अभावमा दुर्गमका बिरामी समस्यामा परेका छन् । स्वास्थ्य चौकीले सिटामोलसमेत उपलब्ध गराउन नस्कँदा दहबगड, काँडा, भामचौर, गडराय, धमेनालगायतका दजनौँ स्वास्थ्य चौकीमा उपचार लिन आउने बिरामी